Ama-Miguel Almiron Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ikhaya IZITOLO ZaseNingizimu AMERICA FOOTBALL Ama-Miguel Almiron Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Kugcine ukubuyekezwa July 2, 2020
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football eliyaziwa kakhulu ngesiteketiso "I-Miggy“. Indaba yethu ye-Miguel Almiron Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
The Life and Rise of Miguel Almiron- Ikhredithi ku- Medium,I-ThePlayersIngxenye and SkySports
Yebo, wonke umuntu uyazi ngesimo sakhe sokuthobeka sokuphila, umuntu ongalimaza impukane esicondweni. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biography kaMiguel Almiron ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Ama-Miguel Almiron Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
Ukuqala, amagama akhe aphelele nguMiguel Ángel Almirón Rejala. U-Almiron wazalwa ngosuku lwe-10th lukaFebhuwari 1994 kunina uSonia Almiron nobaba, uReuben Almiron enhlokodolobha lase-Asunción, eParaguay. Ngezansi isithombe sikaSonia noRuben, abazali bakhe abathandekayo.
UMiguel Almiron Bazali- Sonia noReuben Almiron
Miguel Almiron AKUKHONA ukhuliswe emndenini ocebile noma ongaphezulu komndeni. Umndeni wakhe ubunjengabantu abampofu kakhulu e-Asunción obesebenza kodwa engenayo imfundo yezimali enhle kakhulu futhi kwesinye isikhathi abe nenkinga yemali.
Miguel U-Almiron wazithola ekhulela emndenini ompofu, owasetshenziswa nguyise uRuben amahora angama-18 njengonogada kanti nonina uSonia wasebenza njengomgcini wezitolo. UMiguel Almiron wayenabo cishe izingane zakubo ze-5. Onke amalungu ayisikhombisa omndeni wakhe aphatha indlu encane futhi uMiguel omncane walala embhedeni nonina.
Ama-Miguel Almiron Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - I-Education ne-Career Buildup
Ukushaya ibhola kuqale kakhulu umfana othule nonamahloni. Ngoba abazali bakhe babempofu, uMiguel Almiron omncane akazange anikezwe ithuba lokuthi abe nakho amaqoqo amasha wamathoyizi EMUVA kwebhola likanobhutshuzwayo lakudala alikhahlele kaningi kosuku.
UMiguel Almiron esengumfana omncane. Isikweletu: TPT
UMiguel Almiron wafunda esikoleni samabanga aphansi i-Escuela Basica lapho wadlala khona umdlalo omuhle webhola. “UMiguel wayengumfundi othule kakhulu owenza umsebenzi wasekhaya. Wayengeyena omunye walezi zingane ezivilaphayo ezihlala zinqena noma zingasebenzi, ”Kwembula owayenguthisha wakhe uMaria del Pilar Bernal.
Ngenkathi uMiguel Almiron ekhula eba ngu-7 oneminyaka engu-ubudala, waqala waphupha ngokuwenza mkhulu. Isifiso sakhe esikhulu kwakuwukuba nemali eyanele yokuthenga umndeni wakhe ikhaya elikhulu. Kusenesikhathi, wabona ithemba lomsebenzi webhola lezinyawo njengendlela yakhe yokusiza umndeni wakhe ukubalekela ubuphofu. Lokhu kukholwe ukumbona ebeka amandla nokuzimisela kwakhe emidlalweni yebhola eyaqala enkundleni evikelekile ezungeze imijondolo yeSan Pablo barrio, e-Asuncion.
Isikhuni esomile esinethambo lapho uMiguel Almiron afunda khona ukudlala iBhola. Isikweletu ku-ThePlayersTribune
Isikhuni esomile, esinzima lapho uMiguel ahlonipha khona amakhono akhe okushayela simnikeze ipulatifomu lokunquma ikusasa lakhe. Ubaba ka-Almiron uReuben wasekela indodana yakhe ngokuyisusa endaweni yakhe yokududuza ukuze naye ancintisane nabangane.
"UMiguel wayenamahloni kakhulu. Wayenakho ukuzethemba futhi ayethuka kalula. ngakho-ke ngamhambisa (ekilabhini) ukuze abe nabanye abangane,"Utshele ubaba wakhe uRuben Almiron ESPN.
Ama-Miguel Almiron Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
UMiguel Almiron washeshe waqala ukwenza kahle futhi wenza abangane abaningi kungakapheli nezinyanga ezimbalwa eshiye umgodi owomile noshubile eduze nasekhaya. Akuzange kuthathe isikhathi ngaphambi kokuthi amukele uNovemba 3 Club, izifundi iqembu lakhe eliphakeme elidlale esigabeni sesithathu sebhola laseParaguay. Isikhungo semfundo ephakeme sasiyitshe elalixoshwa esikoleni sakhe samabanga aphansi.
Ukuqonda isifiso somfana wabo sokudlala ibhola kanye nesidingo sokuthola imali kuzo, wonke amalungu omndeni wakhe, kuhlanganise nezihlobo bakwenza konke okusemandleni ukusekela izifiso zakhe. Ngezansi kukhunjulwa okusele ezinsukwini zakhe zokuqala zomsebenzi.
Abazali bakaMiguel Almiron baqinisekisa ukuthi indodana yabo ayikuphuthelwa ukuqeqeshwa kwebhola. Umalume wakhe ngegama “Diego"Nomzukulu ohamba ngegama"Chelo”Bonke babeshintshana ukumphelezela ukuyoprakthiza.
Ama-Miguel Almiron Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
Amathuba eza lapho uMiguel Almiron eqhubeka nokuthuthuka ngamakhono akhe. Eminyakeni ye-14, uMiguel wayekulungele ukushiya uNovemba 3 Club ukuthola ithuba elisha. Teen isikhumba ngamenywa ukuzanywa neClub Nacional, iklabhu elaqopha umlando kanye ama-time ayisishiyagalolunye weParaguay's Primera Division.
Ngeshwa, wehlulekile ukulingwa neqembu. Ukuze kungabikho mshana wakhe wokuyeka amaphupho akhe, umalume kaMiguel Almeron u-Diego wanquma ukuthatha izinto ezandleni zakhe. UDiego wamsiza ukuthola elinye icala noCerro Porteno. Ngamazwi akhe…
"Simthathe siye nonina ezivivinyweni lapho sahlangana khona nabafana be300 vele silinde ukuthola ithuba elifanayo. Angisoze ngakukhohlwa ngoba uMiguel wayengunombolo 301 eqenjini"Umalume kaMiguel Almeron uDiego uthe.
UMiguel udlulisa ukulingwa ngenxa yekhono lakhe. Kodwa-ke, ibingasebenzi ngaso leso sikhathi i-Almiron, ehlulekile ukudlalela iqembu le-Under 15 leqembu le-Under 16. Ubesolwa ngokuba nesisindo esincane, umuntu ongakwazi ukukhula.
U-Almiron wake wamangalelwa ngokuthi ungasindi kakhulu. I-TpT
Ngokudabukisayo ngoNovemba 2010, lapho abadlali be-academy beyehla ezikweletini, uMiguel ompofu wayephakathi kwalawo magama (ohlwini) ayezodonswa phansi. Usongo lokwehlisa uMiguel Almiron luyaqhubeka nonyaka u-2011 engenathemba lokumbona ekhula. Ngaleso sikhathi ubesezandleni zokukhululwa yile kilabhu, umqeqeshi wakhe wangaphambili uHernan Acuna ungene, wamhlenga.
UHernan Acuna wake wamela i-Almiron. IsikweletuTigoSports
"Ngiye kumxhumanisi kanye nabezindaba ngabatshela ukuthi: 'Angifuni iklabhu yokuxosha lo mfana ngoba nje unesikhumba esimnyama"Kusho u-Acuna, iklabhu elingaphansi komqeqeshi we17.
UHernan Acuna wayeyingilosi eyayimgada eyenza u-Almiron waba yingxenye eseceleni kwakhe, emnika imisebenzi yokwenza umdlalo. Wayenomsebenzi wokuphothula uMiguel Almiron eqenjini lokuqala lekilabhu.
Ama-Miguel Almiron Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
UMiguel Almiron ubuyisele emuva ngokusiza iqembu lakhe ukuthi linqobe isicoco seParaguay seClausura ku-2013 ne-Clausura indebe ku-2015. Ngo-Agasti 2015, uMiguel Almirón wezwa isidingo sokudalulwa amasiko amasha nezindlela zokuziqeqesha, yingakho enquma ukushiya izwe lakhe.
U-Almiron usayine iClub Atlético Lanús kwi-Primera División yase-Argentina. Ngesizini nje eyodwa, u-Almiron wasiza iklabhu ukuthi iwine izindondo ze-3 okungukuthi- I-Copa Bicentenario, Supercopa Argentina ne-Argentina Primera División indondo yonke e-2016.
UMiguel Almiron waba nempumelelo enkulu kwiClub Atlético Lanús. Ikhredithi ku-IG nePicnano
Ngemuva kokuthola konke lokhu, u-Almiron wasuka ezweni waya e-US lapho asayinela khona i-Atlanta United FC. Uthi bewazi?… Impumelelo ibuye yaqhubeka naseMelika. UMiguel Almiron waqanjwa kwiMLS Best XI kuwo womabili amasizini akhe kwiMajor League Soccer, kanye nerekhodi leMLS Newcomer of the Year le2017. Umzuzu wakhe omkhulu e-US kwaba lapho asiza iqembu lakhe ukunqoba indebe ye-MLS kwi-2018.
UMiguel Almiron Umlando Wempumelelo- The Rise to Fame Indaba. Isikweletu ku-IG
Ku-31 uJanuwari 2019, u-Almirón wajoyina i-Newcastle United ngemali yokuqoshwa kweklabhu eshaya lokho Michael Owen. Ngesikhathi sokubhalwa, usezinzile empilweni eNorth East yaseNgilandi futhi abantu baseNewcastle bathokozela ukuthi ekugcineni babe nomdlali abangazijabulisa ngaye. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Ama-Miguel Almiron Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngemuva kwawo wonke amadoda amakhulu ngowesifazane, ngakho-ke isisho siyahamba. Futhi ngemuva kwayo yonke ibhola lezinyawo, kunonkosikazi noma intombi ebukhazikhazi njengoba ibonwa kumuntu omuhle we U-Alexia Notto okwenzeka ukuthi abe yintokazi ngemuva kwempilo yothando kaMiguel Almiron.
Hlangana nentombazane enhle ka-Alexia Notto- Intombi kaMiguel Almiron. Isikweletu ku-IG
Intombi enhle enezinwele ezimnyama kaMiguel Almiron iqeqeshwe kahle eZumba. Lolu uhlelo lokuzivocavoca umzimba olwaziwa kakhulu esifundeni saseNingizimu Melika. U-Alexia Notto ukwenze lokhu ukuze aziphilise ngaphambi kokuphelezela indoda yakhe e-US bese eya eYurophu.
UMiguel Almiron wabopha ifindo nentombi yakhe cishe ngoNovemba 2016, unyaka aqala ngawo umsebenzi wakhe ophakeme. Kwakungunyaka futhi ayengewona umzimba. Ukwehlukanisa isithombe sabo somshado, kubukeka njengomkhosi wangasese lapho kumenywe kuphela amalungu omndeni.
UMiguel Almiron no-Alexia Notto Photo Photo
Selokhu babopha ifindo, bobabili abathandi bawujabulele umshado wangasese nowama-drama. Njengasikhathi sokubhala, lo mbhangqwana njengamanje usuhlaliswe ekhaya eNorth East England no-Alexia Notto ukuhlinzeka konke ukwesekwa okungokomzwelo endodeni yakhe ngisho nawe kusho ukubeka umsebenzi wakhe weZumba.
UMiguel Almiron no-Alexia Notto bazixazulula kahle izinto eNewcastle. Isikweletu ku-IG
Ama-Miguel Almiron Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi impilo yomuntu kaMiguel Almiron kude ne-football pitch kungakusiza ukuthola isithombe esiphelele ngaye.
Ukwazi iMiguel Almiron Life yomuntu. Isikweletu ku-MSN
Ukuqala phansi, uMiguel Almiron uphakathi kwabaphambili bebhola be-5 abaphezulu kakhulu abanokuzithoba okukhulu empilweni. Ungumuntu ongalwi neze futhi ulalela kakhulu.
Njengo-N'golo Kante, wazalwa enamahloni futhi ethule, kepha ngakolunye uhlangothi, angaba nozinti futhi abe nomdlandla ikakhulukazi lapho enza umsebenzi wakhe esigodini. UMiguel Almiron ungumuntu ocabangayo ojulile futhi ohlakaniphe kakhulu osebenzisa ingqondo yakhe kuwo wonke amathuba.
Ama-Miguel Almiron Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
UMiguel Almiron wagcina esigcwalisile isithembiso sokuthengela abazali bakhe namalungu omndeni wakhe indlu ngesikhathi athuthela eLanus yase-Argentina e2015, nonyaka ashada ngawo. Kwakumelwe athenge indlu kuleyo ndawo akhulela kuyo, eyinkulu ngokwanele ukuba abe namakamelo kababa wakhe, umama, ugogo, ugogo, omalume, abafowabo nodadewabo ababehlala kuwo.
Namuhla, umkhokha wakhe omkhulu unakekela wonke amalungu omndeni. UMiguel uchitha imali eningi eqasha futhi ebanikeza izindlu kuwo wonke amazwe ebhola lakhe.
Amalungu omndeni kaMiguel Almiron afaka isithombe. Isikweletu ku-IG
Asides Umama wakhe nobaba wakhe, umalume ka-Almiron, uDeigo, ungumuntu olandelayo onethonya kakhulu empilweni yakhe. UDiego ubephethe ukusiza umshana wakhe ukuphatha ukudangala ngemuva kokuhluleka kwecala lakhe neClub Nacional.
Hlangana nomalume kaMiguel Almirons- u-Diego
Ama-Miguel Almiron Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - LifeStyle
UMiguel Almiron ungumdlali webhola lezinyawo ocebile kakhulu ohlola imali yakhe. Kwake kwaba isikhathi esithile, wabamba irekhodi lomdlali okhokhelwa kakhulu kunabo bonke kwi-12th emlandweni we-Major Soccer League (MLS). Kumuntu owake wenza i- $ 209,000 ngehloso ngayinye edaliwe futhi ephethe inani lemakethe lama- $ 9 wezigidi, kulindeleke ukuthi kufanele aphile impilo yobukhazikhazi njengoba kubonwe ngezansi.
Ukuqonda Indlela Yokuphila kaMiguel Almiron. Ikhredithi ku- Telegraph
Lokhu, noma kunjalo, akunjalo. UMiguel Almiron uphila impilo ethobekile futhi uhlakaniphile ngokuphatha imali yakhe.
Ama-Miguel Almiron Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Umdlali wakhe Omthandayo wesikhathi sonke isikhathi uhlala engumgcini wamagoli:
UMiguel Almiron wake waphendula ngokushesha lapho ebuzwa ukuthi yimuphi umdlali amthanda kakhulu emlandweni webhola. Ngokwazi kwakhe ibhola, kunesithombe esisodwa nje. Akuyena omunye umuntu ngaphandle kwegoli likaKaragi odume ngoku- Chilavert owayengundabamlonyeni weqembu lesizwe ngesikhathi sama-1990.
Hlangana noJosé Luis Chilavert- Idigu likaMiguel Almiron. Ikhredithi ku- FoxSports.
Uthi bewazi! UChilavert uhlala kungukuphela komshayimagoli emlandweni obevame ukuthatha ukukhahlazeka kwamahhala nezinhlawulo, kumenze abe yigoli lesibili eliphakeme kunawo wonke amagoli wesikhathi sonke.
I-CV yakhe ibukeka kanjani njengasesikhathini sokubhala: Uma ubheka iqoqo lakhe lokuhlonishwa komuntu nekilabhu, ungazi kalula ukuthi kungani iNewcastle United inqume ukukhokha imali engaphezu kwaleyo eyayithenga uMichael Owen ukuthenga uMiguel Almiron.
Miguel Almiron ukuhlonishwa komuntu ngamunye neklabhu
Njengoba kuphawuliwe ngenhla, uMiguel Almiron wayehlala enokuthile akuhlinzeka ngabaqashi bakhe cishe sonke isizini, kusukela ku-2016.
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda kwethu Miguel Almiron Indaba Yabantwana kanye ne-Untold Biography Facts. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
Salomon Rondon Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-Keylor Navas Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
U-Hirving Lozano Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
Javier Hernandez Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso
U-Antonio Valencia Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
I-Arturo Vidal Childhood Story Plus I-Untold Biography Facts
UDavid Luiz Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
I-Thiago Silva Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
I-Paulo Dybala Ingane Yomntwana Okungeyona I-Untold Biography Facts
I-Alfredo Morelos Ingane Yendaba Yobuntwana ne-Untold Biography Amaqiniso
UJames Rodriguez Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts